Tenisy – «Swan Open 2016» : lasan’i Andritoavina sy i Zarah ny volabe | NewsMada
Tenisy – «Swan Open 2016» : lasan’i Andritoavina sy i Zarah ny volabe
Nisongadina indray ny mpilalao malagasy, tatsy Maorisy teo amin’ny taranja tenisy. Norombahin’i Madagasikara avokoa mantsy ny fandresena na teo amin’ny lehilahy na ho an’ny vehivavy, tamin’izany.
Ratsimandresy Andritoavina ny teo amin’ny lehilahy ary Razafimahatratra Zarah, ho an’ny vehiavvy. Ireo ny nandrombaka ny fandresena teo amin’ny fiadiana ny “Sawn Open 2016”, taranja tenisy. Fifaninanana, notanterahina tatsy amin’ny Nosy Maorisy, ary nifarana ny asabotsy lasa teo. Lasan’izy mianadahy, araka izany, ny lelavola 20.000 Rs niadiana tamin’ity andiany faha-14, ity.
Tsy nisy nanampo mihitsy ny zava-bitan’i Andritoavina satria resiny teo amin’ny manasa-dalana Rasolondrazana Jacob izay efa nandrombaka ity fifaninanana ity intelo misesy. Teo amin’ny famaranana indray nomontsanin’i Andritoavina, tamin’ny seta 2 noho 0 (6/1 ; 6/1), ilay Reonioney, Sébastien Tholozan. Tsy niady mihitsy ny lalaon’izy mirahalahy raha ny vaovao voaray satria nanjaka tamin’ny lafiny rehetra i Andritoavina ary niaiky ny fahaizany ity mpifanandrina taminy ity. Tsy nataon’i Andritoavina nisotro rano mihitsy i Sébastien, tamin’ny “service” nataony izay tena mafy niaraka tamin’ny kapoka mandrivorivo.
Teo amin’ny vehivavy indray, tsy nisy naharesy an’i Zarah (The Queen) ireo mpifanandrina taminy. Natao vondrona tokana ny azy ireo ka mifandimby mihaona ireo mpifaninana rehetra, ka izay be isa indrindra no mpandresy.
Nifandimby noresen’i Zarah avokoa izy rehetra. Ilay Reonionezy, Cécile Nicole, no niady ny laharana voalohany taminy, saingy tsy nahatohitra azy. Lavony tamin’ny seta 2 noho 0 (6/0 ; 6/1) ihany koa ity mpifanandrina aminy ity. Nitsangantsanganan’i Zarah fotsiny ihany koa i Cécile, tamin’ity, ary tsy naharitra afa-tsy ora 1 sy 40 mn monja ny lalaon’izy mirahavavy.